ရှောင်ကျဉ်သင့်တဲ့ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ရှောင်ကျဉ်သင့်တဲ့ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ
စား၀တ်နေရေးအတွက် အပြင်မှာအလုပ်လုပ်နေကြသူတွေဟာ အလုပ်ကပြန်လာရင် မိမိနားခိုရာအိမ်မှာပဲ အနားယူကြတာ ထုံးစံပါပဲ။ အိမ်ဟာ အနားယူအပန်းဖြေနေရာတစ်ခုသာဖြစ်သင့်ရာက အခုနောက်ပိုင်းမှာ အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေ ၀ိုင်းရံလာနေတာတွေ့လာရပါတယ်။ လူသုံးကုန်တွေ ခေတ်မီဆန်းပြား လာတာနဲ့အတူ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုပိုများလာကာ ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာစေ ပါတယ်။ အောက်ပါအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကင်ဆာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှ ကြေညာထားတဲ့ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ကာစီနိုဂျင်တွေဖြစ်ကြတာမို့ စာဖတ်သူများ ရှောင်ကြဉ်သုံးစွဲကြဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့၊ မကောင်းတဲ့ ဖော်မယ်ဒီဟိုက်၊ နိုက်ထရိုဘင်ဇင်းနဲ့ မီသိုင်လင်းကလိုရိုက် စတာတွေဟာ နေ့စဉ်အသုံး များတဲ့ ရာဘာလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ ပလတ်စတစ်၊ အရောင်ဆိုးဆေး၊ အမွှေးအကြိုင်ထွက်ကုန်တွေ၊ အလှကုန်ပစ္စည်း ရေမွှေးတွေ ဘော်ဒီလိုးရှင်းလိမ်းဆေးတွေနဲ့ ခေါင်းလျှော် ရည်တွေမှာပါ၀င်နေတာဆိုတော့ အဲဒါတွေကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် အသုံးများလေလေ ကင်ဆာဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများလေလေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီလိုကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ အထိအတွေ့နည်းအောင် စီစဉ်နိုင်ပါမှ မိမိရော မိမိ မိသားစုပါ ကျန်းမာရေးဘေးကင်းမှာဖြစ်တယ်။
2. လေသန့်အောင်ဖျန်းတဲ့ အနံ့ဖျောက်တဲ့ Air Freshener
အနံ့ဖျောက်ဆေးဖန်းဘူးအများစုမှာ အငွေ့ပျံစေတဲ့ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေပါ၀င်တဲ့ အတွက် ဖြစ်နိုင်ရင် မသုံးတာအကောင်းဆုံးပါ။ အခန်းကိုအလင်းရောင်နဲ့ လေကောင်းလေသန့်ရရှိအောင် စနစ်တကျထားသိုခြင်း၊ ပြတင်းပေါက် တွေဖွင့်ထားခြင်း၊ ပန်ကာနဲ့ လေမှုတ်ပန်ကာတွေ တပ်ဆင်ဖွင့်ထားခြင်း စတာတွေက အနံ့ဖျောက်ဆေးတွေ သုံးစရာမလိုဘဲ အခန်းကို အနံ့အသက်ကင်းစေပါတယ်။
3. အလှပြင်ပစ္စည်းတွေနဲ့၊ တစ်ကိုယ်ရေသုံး သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ
လူတိုင်းနေ့စဉ် စွဲမြဲစွာသုံးကြတဲ့ အောက်ပါတို့က လူတွေအထူးသဖြင့် မ လှချင်၊ ကို အကောင်းကြိုက်တို့ကို ကင်ဆာဖြစ်စေတာတွေနဲ့ နေ့စဉ်အထိအတွေ့များစေပါတယ်။
3.(1) ကော့စမက်တစ် မှန် မိတ်ကပ်များ၊ အောက်ခံမိတ်ကပ် Foundation များ
အဲဒီအလှပြင်မိတ်ကပ်တွေမှာပါတဲ့ BHA နဲ့ TALC ပေါင်ဒါက ကာစီနိုဂျင်တွေဖြစ်ကြတယ်။ TALC က အဆုတ်တွေကို ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်စေတယ်။ ကလေးပေါင်ဒါတွေမှာပါတဲ့ TALC ကြောင့် အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ မျိုးဥအိမ်ကင်ဆာတွေ ဖြစ်လာစေတာတွေ့ကြရတယ်။ TEA ခေါ် Triethanolamine က နိုက်ထရိုက်တွေ ဓာတ်ပြုပြီး ကာစီနိုဂျင်နိုက်ထရိုဆမင်း Nitrosamines တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားစေတယ်။
လာနိုလင် Lanolin ဆိုတဲ့ အရာ၀တၳုက DDT ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ တခြားအင်းဆက်နဲ့ ပိုးမွှားသတ်ဆေး တွေနဲ့ ထိတွေ့ရောနှောနေတတ်ကြတယ်။ ပါရာဘင် Parabens ဆိုတဲ့ ရေနံထွက်ဓာတု ပစ္စည်းတစ်မျိုးက ထိတွေ့တဲ့အရေပြား တွေကိုရောင်ရမ်း Contact Dermatitis ဖြစ်လာစေတယ်။ Fragrance (သင်းရနံ့) ဆိုတာတွေက အရေပြားတွေကို အဆိပ် အတောက်ဖြစ်စေပြီး ရောင်ရမ်းလာစေတယ်။
ဒါကြောင့် ပွဲနေပွဲထိုင်သွားတဲ့ အချိန်ကလွဲပြီး ကျန်အချိန်တွေမှာတော့ မိတ်ကပ်တွေမသုံးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ မဖြစ်မနေ လိမ်းကျံပြီဆိုရင်လည်း၊ ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းသန့်စင်ပစ်သင့်တယ်။
3.(2) ကတ္တရာပါတဲ့ သွားတိုက်ဆေးများ (Crest Tartar Controls Toothpaste)
သွားတိုက်ဆေးတွေမှာပါတဲ့ FD & BLUE တွေက ကာစီနိုဂျင်တွေဖြစ်ကြတယ်။ ဆက်ကရင် Sacchrin ကလည်း ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သလို သွားတွေကြံ့ခိုင်စေတယ်ဆိုတဲ့ ဖလူအိုရိုက် Fluoride ကလည်း ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာ တွေ့ရတယ်။
3.(3) ဆံပင်ပျော့ဆေး ဥပမာ VO5 Conditioner (Essence of Neutral Henna)
ဆံပင်ပျော့ဆေးတွေမှာပါတဲ့ ဖော်မယ်ဒီဟိုက်ဒြပ်ပေါင်းတွေက ကင်ဆာဖြစ်စေတယ်။ အာရုံကြောတွေကို အဆိပ်သင့် စေပြီး ထိမိတဲ့အရေပြားတွေ ရောင်ရမ်းစေတယ်။ ဓာတ်မတည့်ယားယံတာတွေ ဖြစ်စေတယ်။ Polysorbate 80 ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းကြောင့်လည်း ကင်ဆာတွေဖြစ်လာစေတယ်။ FD & RED4 ကလည်း ကာစီနိုဂျင်ပဲဖြစ်တယ်။ Fragrance ဆိုတဲ့ပစ္စည်း ကလည်း ကာစီနိုဂျင်ပဲဖြစ်တယ်။ ခေါင်းလျှော်ရည်ဘူးတွေမှာလည်း ဓာတုပစ္စည်းတွေပဲ အများစုသုံးထားတာမို့ တစ်ချိန်လုံး အဲဒါတွေသုံးနေမယ့်အစား ရိုးရာတရော်ကင်မွန်းသီး နဲ့ ခေါင်းလျှော်ပေးသင့်ပါတယ်။
3.(4) ဆံပင်ဆိုးဆေးများ Permanent Hair Color
ဆံပင်ဖြူသူတွေသာမက လူငယ်တွေကပါ ဖြူနီကြောင်ကြားကာလာစုံ ဆံပင်ဆိုးဆေးအမျိုးမျိုး သုံးစွဲမှုများလာကြတယ်။ မိမိခေါင်းပေါ် အဆိပ်တွေ၊ ကာစီနိုဂျင်တွေတင်ထားပြီး ကင်ဆာအဖြစ်ခံနေကြတာ သတိထားဖို့ကောင်းပါတယ်။ အဲဒါတွေမှာပါတဲ့ ကွာတားနီယံ Quaternium 15, Fomaldehyde Releaser တွေက ကာစီနိုဂျင်တွေ၊ အာရုံကြောအဆိပ်တွေ၊ အရေပြားရောင်ရမ်းစေတာတွေနဲ့ အလာဂျီထစေတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ကြတယ်။
Diethanolamine (DEA) က ကာစီနိုဂျင်ဖြစ်တဲ့အပြင် နိုက်ထရိုဂျင်တွေနဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါ၊ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ နိုက်ထရိုဂျင်ဆမင်းတွေအဖြစ်ပြောင်းကာ ကင်ဆာတွေဖြစ်လာစေတယ်။ Phenylenediamine ပါ၀င်မှုကြောင့် ကင်ဆာနဲ့ အရေပြားရောင်ရမ်းနာတွေဖြစ်စေတယ်။ Propylene Gycol နဲ့ Fragrance ပါ၀င်တာကြောင့် ထိတွေ့တဲ့အရေပြားတွေ ရောင်ရမ်းလာစေတယ်။ သင်္ကြန်အချိန်ရောက်ရင် လူငယ်လေးတွေသာမက ကလေးပေါက်စနတွေကိုပါ ဖြူနီကြောင်ကျားရောင်စုံ ဆံပင်ဆိုးဆေးဆိုးတာမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆံပင်ပေါ်မှာ လချီနေတတ်တဲ့ အဲဒီဆိုးဆေးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကို ထည့်စဉ်းစား ဆင်ခြင်သင့်တယ်။
ဆိုးဆေးတွေ အသုံးပြုတာတွေကြောင့် NHL လင့်ဖိုးမား၊ မိုင်လိုမား Multiple Myeloma နဲ့ တခြားကင်ဆာအမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့ အထောက်အထားတွေတွေ့လာရပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် အလှအပအတွက် ကင်ဆာအဖြစ်ခံပြီး ဆံပင်ရောင်စုံ ဆိုးမယ့်အစား သဘာ၀အတိုင်းထားတာက ကောင်းပါတယ်။
အချို့သော တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများမှာ ဓာတုပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ Crystaline Silica တွေက ကာစီနိုဂျင်တွေဖြစ်တဲ့အပင် မျက်စိအရေပြားနဲ့အဆုတ်ကို ဒုက္ခပေးပါတယ်။ အလာဂျီလည်းထစေတယ်။ အပြင်းစား ကြေးချွတ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ Heavy duty Cleanser တွေမှာပါတဲ့ Crystaline Silica တွေကလည်း အလားတူပဲ ကင်ဆာအမျိုးမျိုးဖြစ်စေသလို မျက်စိအရေပြားနဲ့ အဆုတ်တွေကို အလာဂျီဖြစ်စေတယ်။ ရိုးရိုးဆပ်ပြာနဲ့ ရေများများသုံး သန့်ရှင်းတာကပဲ ဘေးကင်းစေပါတယ်။
5. လိုင်ဇောပါတဲ့ ပိုးသေစေတဲ့ ဖျန်းဆေး (Lysol disinfected spray)
Orthophenylphenol (OPP) တွေပါ၀င်တဲ့အတွက် ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့အပြင် ဓာတ်မတည့်တာတွေပါ ဖြစ်စေ တယ်။
6. ကြောင်သန်း၊ ခွေးသန်းနဲ့ မွှား ပပျောက်စေတဲ့ လည်ပတ်
အဲဒီမှာပါတဲ့ ပရိုပိုဆာ Propoxur ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းက ကာစီနိုဂျင်နဲ့ အာရုံကြော အဆိပ်ဖြစ်စေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်တယ်။ အဲဒါတွေနဲ့ ထိတွေ့မိရင် ချက်ချင်းရေဆေးဖို့ လိုအပ်တယ်။
7. ရေညှိပျောက်ဆေး (Ortho Weed B Gon Lawn Weed Killer)
အဲဒီမှာပါတဲ့ ဆိုဒီယမ်ဒိုင် ကလိုရိုဖီ နောက်ဆီအက်ဆီတိတ် Sodium dichlorophenoxyacetate ဆိုတာက ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး လင်ဖိုးမား၊ တစ်သျှူးပျော့တွေရဲ့ ဆာကိုးမားနဲ့ တခြားကင်ဆာတွေဖြစ်လာစေတယ်။ ဒါ့ပြင် အာရုံကြောနဲ့ မျိုးပွားအင်္ဂါတွေမှာ အဆိပ်ဖြစ်လာစေတယ်။
8. အမဲသားချောင်း (Beef Franks)
အမဲသားချောင်းမှာပါ၀င်တာတွေက ဘင်ဇိုင်းဟက်ဆာကလိုရိုက်ဆိုတဲ့ ကာစီနိုဂျင်နဲ့ dacthal ဆိုတာက ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့အပြင်၊ အလာဂျီနဲ့ ဓာတ်မတည့်တာတွေပါ ဖြစ်လာစေတယ်။ DDT, Dieldrin တွေကလည်း ကာစီနိုဂျင်နဲ့ တိရစၧာန်ထွက် အီစထရိုဂျင်တွေဖြစ်ကြတယ်။ တခြားပါတဲ့ ဟော်မုန်းတွေကလည်း ကာစီနိုဂျင်နဲ့ မိန်းမအသွင်အပြင်ပိုဖြစ်စေတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေပေးကြတယ်။ တိရစၧာန်မွေးမြူရေးမှာသုံးတဲ့ ပဋိဇီ၀ဆေးတွေက လူတွေမှာ ဆေးယဉ်ပါးတာအပြင် အလာဂျီနဲ့ ကင်ဆာတွေဖြစ်လာစေတယ်။ မပုပ်သိုးအောင်ထည့်တဲ့ ယမ်းစိမ်းနိုက်ထရိုက်တွေကြောင့်လည်း အသားထဲကပါတဲ့ အေမင်း Amine နဲ့ ပေါင်းပြီး ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ နိုက်ထရိုဆမင်းတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားကာ လူကိုဒုက္ခပေးပါတယ်။
9. အဆီမထုတ်ထားတဲ့ နွားနို့ (Whole milk)
အဲဒါတွေမှာပါတဲ့ DDT, Dieldrin တွေက အထက်ကပြောသလို ဆိုးကျိုးဖြစ်စေတယ်။ ဟက်ဆာကလိုရိုဘင်ဇင်းက ကင်ဆာအပြင် အာရုံကြောနဲ့ မျိုးပွားအင်္ဂါတွေကို အဆိပ်သင့်စေတယ်။ ပါလာတဲ့ ပဋိဇီ၀ဆေးတွေကလည်း အထက်ပါအတိုင်း ဒုက္ခပေးတယ်။ ကြီးထွားဟော်မုန်းတွေပါလာတဲ့အတွက် အဲဒါတွေက ရင်သားကင်ဆာ၊ အူမကြီးနဲ့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာတွေ ဖြစ်လာစေတာတွေ့ရတယ်။
10. အ၀တ်လျှော်ဆပ်ပြာများ (Laundry Detergents)
အဲဒီ ဒီတားဂျင့်တွေမှာ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေအများစုပါ၀င် တယ်။ ရေလျှော်တာမပြောင်ရင် အ၀တ်တွေပေါ်ကပ်ကျန်ခဲ့တဲ့ ဆပ်ပြာတွေက အရေပြားထဲစုပ်၀င်သွားသလို အငွေ့ပျံသွားတာတွေက လေထဲက တစ်ဆင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲ ရောက်သွား တယ်။ အဲဒါတွေမှာလည်း ကင်ဆာဖြစ်စေတာတွေနဲ့ မျိုးပွားအင်္ဂါတွေပေါ်မှာ အဆိပ်ဖြစ်စေတာတွေပါ၀င်တယ်။ အဆုတ်ကိုထိခိုက်စေတာ၊ အဆုတ်အမြှေးပါးရောင်ရမ်းစေတာတွေ ပါ၀င်တယ်။ နှလုံးနဲ့ သွေးကြောအဖွဲ့၊ ကျောက်ကပ်နဲ့ အာရုံကြောအဖွဲ့ကို ထိခိုက်စေတဲ့ဖီနောတွေလည်း ပါ၀င်တယ်။
အထက်ပါတွေကို လေ့လာကြည့်ရင် အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းတွေက နေ့စဉ်သုံးဖြစ်နေတော့ ကင်ဆာဖြစ်စေဖို့၊ အလာဂျီထစေဖို့ လမ်းစပိုများနေစေတယ်။ တချို့ လူသုံးကုန်တွေပေါ်မှာ အန္တရာယ်သတိပေးအဖြစ် ကင်ဆာဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ ထည့်ရေးမထားကြပါဘူး။ စားသောက်ကုန်တွေပေါ်မှာလည်း ကိုလက်စထရောလ် အကြောင်းလောက်ပဲရေးပြီး ကာစီနိုဂျင် ဖြစ်တယ်ဆ်ိုတာမပါဘူး။ အလှပြင်ပစ္စည်းတွေမှာလည်း အလားတူပါပဲ။ ပါ၀င်ပစ္စည်းလောက်ပဲ ဖော်ပြထားကြတယ်။ အင်းဆက် ပိုးနှိမ်နင်းဆေးတွေ၊ ပိုးသတ်ဆေးတွေမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ အခုလို အဲဒီပစ္စည်းတွေက ကင်ဆာဖြစ်စေတယ်လို့ ဖော်ပြပေးနိုင်တာကလည်း သိပ္ပံပညာရှင်တွေ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လေ့လာမှုကြောင့်သိရှိရတာပါ။
ကမ်ဘာအနှံ့မှာ ကင်ဆာဖြစ်ပွာနှုန်းက ဒုံးပျံနှုန်းနဲ့တစ်ဟုန်ထိုးမြင့်တက်နေပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်မှာ လူသားအားလုံးရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံက သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကင်ဆာရောဂါခံစားလာရပြီး လေးပုံ တစ်ပုံကတော့ အဲဒီရောဂါနဲ့ပဲ သေဆုံးရတယ်။ အဲဒီကင်ဆာအတော်များများက အထက်ဖော်ပြပါ အိမ်တွင်းသုံး ပစ္စည်းတွေ၊ အလှပြင်ပစ္စည်းတွေ၊ မွေးမြူရေးထုတ်အစားအစာတွေ အားလုံးကို ရှောင်ကြဉ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကင်ဆာဖြစ်နှုန်းလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ စစ်ဆေးအရေးယူမှုနဲ့ နည်းပညာအားနည်းချက်တွေကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းဟာ အခုနောက်ပိုင်း ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်း အတော်ကြီး မြင့်တက်နေတယ်။ ကမ်ဘာမှာ ကင်ဆာအဖြစ်ဆုံး ဆယ်နိုင်ငံထဲမှာ ဒုတိယ ချိတ်နေတာဆိုတော့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်း မိမိကိုယ်တိုင် အထက်ပါလူသုံးပစ္စည်းတွေကို နေ့စဉ်မသုံးဖြစ်အောင် ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ ပစ္စည်းရွေးချယ်သုံးစွဲနိုင်အောင် အထူးသတိထားသင့်ပါတယ်။
ပတ်၀န်းကျင် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမှာ ကင်ဆာဖြစ်စေတာတွေက အနှံ့အပြားဖြစ်နေတာဆိုတော့ အထူးသတိထားပြီး ရွေးချယ်သုံးစွဲပါမှ၊ သဘာ၀ပစ္စည်းများကိုသာ ရွေးချယ်သုံးစွဲပါမှ ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုမှ အထိုက်အလျှောက် ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ရှာဖွေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Vol: 13, No: 38, 29-6-2016